သံလွင်: အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစလား ???
အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစလား ???
ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြန်တမ်းများ
ယနေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒု ၀န်ကြီး ၂ ယောက်နဲ့ ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တဦးတို့ကို ရာထူးတွေက နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်ပါပြီတဲ့။
ဒု ၀န်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာနက ဦးတင့်လွင်နဲ့ စွမ်းအင် ၀န်ကြီး ဌာနက ဦးစိုးအောင် တို့ကို ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုတယ်လို့ သမ္မတက လက်မှတ် ထိုး ကြေညာထားပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီးက ၅ ထောင်တန်ဆင်းကဒ်နဲ့ ဆိုင်မဆိုင် မသိရသလို၊ လျှပ်စစ်မီး မလုံလောက်မှုနဲ့ စွမ်းအင် ဒုဝန်ကြီး သက်ဆိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ မသိရပါ။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဦးသာဦးကိုလည်း အလားတူ နုတ်ထွက်ခွင့်ကို သမ္မတက လက်မှတ်ထိုး ပြန်တမ်း ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။
အခုတလော နေပြည်တော်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ ထိုင်းခရီးစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ရခြင်းက တဖက်မှာ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအပြင် ဒီရက်ပိုင်းတွေက စပြီး ၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ သတင်းတွေလည်းထွက်နေပါတယ်။ အခုတော့ ဒုဝန်ကြီး ၂ ယောက် စတင်ပြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တဲ့ သဘောပါပဲ။
လူမြင်ကွင်းမှာ ပျောက်ကွယ်ပြီး ရာထူးက နုတ်ထွက်စာတင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဒု သမ္မတ (၈) လုံးခေါ် သီဟ သူရ တင်အောင်မြင့်ဦးကိုတော့ သမ္မတက ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့အတွက် ဆေးခွင့် ၂ လ ပေးထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးခွင့်ကာလကုန်ဆုံးမယ် ဇူလှိုင်လ ကျရင်တော့ အဖြေကို သဲသဲကွဲကွဲ သိရတော့မှာပါ။
နေပြည်တော်က လူရှင်းပွဲမှာ ဘယ်ဝန်ကြီးတွေ မျက်ခုံးလှုပ်နေမလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ တာဝန်က အနားပေးခံရမယ်လို့ သတင်းပြေးနေတာကတော့ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း၊ အားကစား ၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းတို့ ပါဝင်နေ တယ်လို့ ဆိုပြီး ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကတော့ ယခု ရာထူးအတိုင်း ဆက်လက်တည်မြဲနေမယ်လို့ သတင်းများ က ဆိုနေပါတယ်။
at 6/06/2012 08:52:00 AM
6 French Aid Workers Among 8 Killed by Gunmen in Niger - The six worked for an international aid group; they and their local guide and driver were killed Sunday by gunmen riding motorcycles in an area of southwes...
အမရေိကနျက ပွနျလာသူ အမြိုးသား ၁ ဦးတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးတှရှေိ့ - အမရေိကနျနိုငျငံက ပွနျလာတဲ့ စဈကိုငျးတိုငျး ကလေးမွို့နယျနေ အသကျ ၅၃ နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဦးမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးတှရှေိ့တယျလို့[...] The post အမရေိကနျက ပွန...
▼ 06/03 - 06/10 (32)
အထိုင်များလို့ ခါးဝေဒနာ မဖြစ်ရအောင်
၁၀၀၀၀ ကျပ်တန် ထုတ်မည်
အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းသည် အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်ခံရမှု...
“မေစုကို ကြိုဆို၊ ဘန်ကောက်သွားဖို့ ကြိုးစား၊ ထိုင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်များ စာအုပ်
နှစ် ၃ဝ ထည့်ဝင်ကြေးဖြင့် အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်မည့်...
တပ်မတော်၏ နိုင်ငံရေးမှ နောက်ဆုတ်မည့် ခြေလှမ်းကိုြ...
သောကြာဂြိုဟ် နေနှင့် အနီးကပ်ဆုံး ဖြတ်သန်း
“မွတ်ဆလင်ကုလား” ဟူသော စာသားပြင်ဖတ်ရန် ပြန်ကြားရေးဝ...
လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြန်ေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းခရီးစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံ...
ရခိုင်၊ မွတ်စလင်၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်၊ ၈၈ တို့ ပဋိပ...
အချိန်ပြည့် လျှပ်စစ်မီး ပေးတော့မည်ဟု ဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ယူကေရောက် မြန်မာပြည်သားတို့ ...
ဥပဒေစိုးမိုးရေး အရေးကြီးကြောင်း ဒေါ်စု ထပ်လောင်း ပြော
အာဖရိကဇစ်မြစ်ကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ မြန်မာ့ အရိုးများ
အစိုးရနှင့် KIA စစ်ရေး အခြေအနေ ဆွေးနွေး
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ အရေးအသား လူအများ ဝေဖန်
နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်သူများအတွက် အခက်အခဲများ ရှိနေသေး
ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးကို ဆေးခွင့် နှစ်လ ပေးထား
VOA နဲ့ မြန်မာ့အသံ တို့ ပူးပေါင်းပြီ
တပ်ချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးနေ...
ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားနေသောအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ထောင်ခေ...
ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းသည် ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်
“ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်နေတာ ဘယ်သူ့ အတွက် ဒီမိုကရေစ...